अस्थायी, ज्यालादारीले किन शुरु गरे धर्ना ?  Clickmandu
अस्थायी, ज्यालादारीले किन शुरु गरे धर्ना ?
क्लिकमान्डु २०७५ असार २७ गते १८:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही मन्त्रालयले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी धर्नामा उत्रिएका छन् ।
निगममा १७४ जनाका लागि जागिरको अवसर
जागिर पाइएन ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ जागिर
श्रम मन्त्री भएर १ वर्षमा के के गरे गोकर्ण विष्टले ? यस्तो छ प्रगति विवरण
चन्द्रागिरिमा बाक्लो हिमपात (फोटोफिचर)